ခေါင်းစဉ်က WINDOWS 10 - ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး INSTALL လုပ်နည်း - WINDOWS ကို - 2019
ခေါင်းစဉ်က Windows 10 - download, delete, ဒါမှမဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆောင်ပုဒ်ဖန်တီး
Windows 10 ကိုခုနှစ်တွင် version ကို 1703 (ဖန်တီးရှင်များ Update ကို) ကိုကို Windows Store မှ themes များ download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ခေါင်းစဉ်များဝေါလ်ပေပါ (သို့မဟုတ်ဆလိုက်ရှိုးများပုံစံအတွက် Desktop ပေါ်မှာပေါ်လာကြောင်းအစုံ), system ကိုအသံ, mouse ကိုထောက်ပြခြင်းနှင့်အရောင်များ၏မှတ်ပုံတင်ကြေးပါဝင်နိုင်သည်။
ဤတိုတောင်းလမ်းညွှန်ထဲမှာ - ဘယ်လိုမလိုအပ်သောကိုဖယ်ရှားသို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆောင်ပုဒ်ဖန်တီးသီးခြားဖိုင်အဖြစ်သိမ်းဆည်းဖို့ဘယ်လို, စတိုးဆိုင်က Windows 10 ကနေဆောင်ပုဒ် download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့။ Windows တွင်တစ်ဦးချင်းစီဖိုင်တွဲ၏အရောင်ကိုပြောင်းလဲနည်း, Window Rainmeter အတွက် Making, Window 10 အတွက်ဂန္ Start Menu ကိုပြန်သွားဖို့ကိုဘယ်လို :. ကိုလည်းရှုပါ။
themes များ download လုပ် install လုပ်နည်း
ဒီအရေးအသား၏ထိုအချိန်တွင်ရိုးရှင်းစွာ app store ကို Windows 10 ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်, သင်အရေခွံနှင့်အတူသီးခြားအပိုင်းကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သော partition ကိုမြို့သားပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အောက်ပါအတိုင်းသို့ရ
Options သွားပြီး - ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သညာ - Themes ။
"ဟုအဆိုပါ store မှာအခြားအကြောင်းအရာများ။ " ကိုနှိပ်ပါ
ရလဒ်အနေနဲ့ app တစ်ခုစတိုးဆိုင် download ပြုလုပ်ရရှိနိုင်သော themes များနှင့်အတူအခန်းတွင်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်။
သင်တစ်ဦးဆောင်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်က "Get" နှင့်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါလိမ့်မည်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ချက်ချင်းဒေါင်းလုပ်ပြီးနောက်သင် store မှာစာမျက်နှာ themes များပေါ်တွင် "Start ကို" ကိုနှိပ်ပါနိုငျသညျ, သို့မဟုတျ "Settings" ကိုသွားပါ - "Personalisation စာ" - "Themes" ဒေါင်းဆောင်ပုဒ်ကို select နှင့်ရိုးရှင်းစွာပေါ်မှာကလစ်လုပ်ပါ။
ပြီးသားအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့, themes များအများအပြားပုံရိပ်တွေဆံ့နိုင်ပါတယ်အသံ, mouse ကိုထောက်ပြ (cursor) အဖြစ်မှတ်ပုံတင်အရောင် (default အနေနဲ့ Start မီနူးပြတင်းပေါက်၏ဘောင်, Start button ကို, အအုပ်ကြွပ်၏နောက်ခံအရောင်မှလျှောက်ထား) ။
သို့သော်အများအပြားနောက်ခံပုံရိပ်တွေနဲ့အရောင်များ မှလွဲ. ဘာမှမပါဝင်ခဲ့ပါကသူတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှ၌ငါ့ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အခြေအနေကသင့်ကိုယ်ပိုင် themes များကိုဖန်တီးရန်အပြင်, အချိန်နှင့်အတူပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ် - Windows 10 ကိုတစ်ဦးအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်။
သင်အသုံးပြုနေတဲ့ကြသည်မဟုတ်အချို့သောအကြောင်းအရာများ, အများကြီးရှိပါကနည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်သူတို့ကို delete:
"Personal" - - က "Settings" ကိုအတွက်ခေါင်းစဉ်စာရင်းထဲမှာပေါ်မှာ Right-click နှိပ်ပြီး "Themes" နှင့်ဆက်စပ် Menu ထဲမှာတစ်ခုတည်းကို item ကို select "ကိုဖျက်" ။
"Applications ကိုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများ" (စတိုးဆိုင်များအစုတခုရှိခဲ့လျှင်, လျှောက်လွှာစာရင်းထဲတွင်ပြသပါလိမ့်မည်) ကို installed Theme ကို select လုပ်ပြီး, select လုပ်ပါ - "Applications ကို" - "Settings" ကိုသွားပြီး "ဖျက်ပစ်ပါ။ "
သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆောင်ပုဒ်ဒီဇိုင်း Windows 10 ကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို
Windows 10 ကို (နှင့်အခြားမည်သူမဆိုကပေါ်သွားနိုင်စွမ်းနှင့်အတူ) များအတွက်ထုံးစံဆောင်ပုဒ်ကိုဖန်တီးရန်ကအောက်ပါ personalization settings ကိုလုပ်ဖို့လုံလောက်ပါတယ်:
တစ်ခုတည်းပုံရိပ်, ဆလိုက်ရှိုး, အစိုင်အခဲအရောင် - ကို "နောက်ခံသမိုင်း" အတွက်ဝေါလ်ပေပါကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ။
ကို formats .cur သို့မဟုတ်သည့်အတွက် - အကယ်. သင်၏ဖြစ်ရသောစနစ်အသံ (သင်ကသင်၏ WAV ဖိုင်တွေကိုသုံးနိုင်သည်), အဖြစ် mouse ကို (အမှတ် "mouse ကို cursor"), ပြောင်းဖို့လက်ရှိဆောင်ပုဒ်၏ thumbnail ကိုအောက်မှာဆောင်ပုဒ်အောက်မှာအလိုရှိသော။
က "အဓိကအကြောင်းအရာ Save" နှင့်သူမ၏အမည်အားမမေးနှိပ်ပါ။
ခြေလှမ်း4ပြီးနောက်, ဆောင်ပုဒ် installed themes များစာရင်းထဲတွင်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ သင်သည်လက်ျာ mouse ကို button ကို click ပါကဆက်စပ် Menu ထဲမှာ "မျှဝေဘို့ဆောင်ပုဒ် Save" ဖြစ်လိမ့်မည် - သင်က extension ကိုနှင့်အတူသီးခြားဖိုင်ရန်သင့်ထုံးစံဆောင်ပုဒ်ကယ်ဖို့ခွင့်ပြု .deskthemepack
ဆောင်ပုဒ်ကိုသင်သတ်မှတ်အပေါငျးတို့သရွေးချယ်စရာဆံ့ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သိုလှောင်ထား, နှင့်အသုံးပြုမှု Windows 10 ကိုအရင်းအမြစ်များကိုအတူမပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ် - နောက်ခံပုံများ, အသံ (နှင့်အသံအစီအစဉ်၏ parameters တွေကို), mouse ကိုထောက်ပြ, ထိုသို့ Windows 10 ကိုအပြေးမဆိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: Laws of Reflection. #aumsum #kids #education #science #learn (အောက်တိုဘာလ 2019).